Didier Deschamps oo u jawaab celiyay Zidane kaddib markii uu codsaday in Benzema uu ku laabto xulka qaranka France – Gool FM
(France) 11 Nof 2019. Tababaraha xulka qaranka France ee Didier Deschamps ayaa ka jawaab celiyay hadaladii ka soo yeeray macalinka kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane, kaddib markii uu ka baaqay in Karim Benzema uu markale dib u xirto maaliyada xulkiisa.
Zinedine Zidane ayaa ku baaqay in Karim Benzema mar kale loogu yeero xulka qaranka France, kaddib in muddo ah uu ka maqnaa.
Benzema oo 31 jir ah ayaa u ciyaaray xulkiisa qaranka France in ka badan 80 kulan oo caalami ah xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta, laakiin waxaa laga saaray tan iyo markii lagu eedeeyay sanadkii 2015 shirqool la sheegay inuu kula kacay saaxiibkiisii ​​hore Mathieu Valbuena.
Zidane ayaa jimcihii la soo dhaafay ku sheegay shir jaraa’id inuusan si sax ah u ogeyn waxa ka hor taagan Benzema inuu ku soo laabto u ciyaarista dalkiisa, laakiin wuxuu carabka ku adkeeyay in ninka ay isku wadanka yihiin uu ka mid yahay weeraryahanada ugu fiican adduunka xilligan la joogo.
Haddaba Didier Deschamps oo ka soo muuqday shir jaraa’id ayaa wuxuu ka jawaab celiyay hadalada ka soo yeeray macalinka Real Madrid ee Zinedine Zidane wuxuuna yiri:
“Karim Benzema qaab ciyaareed fiican ayuu ku sameynayaa xilli ciyaareedkan kooxda Real Madrid, sidaasoo ay tahay taasi kama dhigna inaan markale ku arki doono maaliyada xulka qaranka France, waxaa laga saaray tan iyo arrintii foosha xumeyd ee fiidiyoowga 2015-kii”.
Intaas kaddib wuxuu Didier Deschamps si maskixiyan ugu jawaabay hadaladii ka soo yeeray Zinedine Zidane ee uu ku difaacayay Benzema wuxuuna yiri:
“Wax dhibaato ah kuma qabo taas, waa tababaraha Real Madrid waana waajibaadkiisa inuu qaabkaas kaga hadlo isaga”.
Waa cunsuri wayn
Dhimo dheh wacalyahaw